၁၀.၁ "Android Car Dvd၊ ၁၀.၁" Android 5.1 Car Dvd, 10.1 "Android 4.4 Car Dvd
ဖေါ်ပြချက်:၁၀.၁ "Android Car DVD,10.1 "Android 5.1 Car Dvd,10.1 "Android 4.4 Car Dvd,10.1 "Android 5.1.1 Car Dvd,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car Dvd
၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car Dvd ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ၁၀.၁ "Android Car DVD, 10.1 "Android 5.1 Car Dvd ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, 10.1 "Android 4.4 Car Dvd R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Hyundai Sonata 2011-2013 အတွက်ကား Stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သဘောတူညီချက်အတွက် Navigation Multimedia Player Car Stereo 8  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Navigation Multimedia Player Car Stereo Civic ၂၀၀၆  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Prado 2014 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Civic 2012 အတွက် 10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Sonata 2011-2013 2din android ကားတစ်စီးအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Nissan Sylphy အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ဖြစ်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို Highlander 2015  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Toyota RAV4 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRV 2015 အတွက် 10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW Golf7 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ဖြစ်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
IX25 အတွက် 1024x600 Octa Core Car DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၁၀.၁ လက်မ Deckless 2013-2015 Nissan Qashqai  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2G RAM 16G ROM Stereo နှင့်သဘောတူညီမှု ၇  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2G RAM 16G ROM Stereo ဖြင့် ၂၀၀၆ စီးတီး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW ဂေါက်သီး7ကား DVD ကိုသွားလာမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Toyota VIOS / YARIS ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတွက်က deckless car DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Kia K3 အတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၅ အတွက် deckless car DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ford ESCORT 2014-2015 အတွက် deckless car DVD ဖြစ်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
က deckless 10.1 လက်မ Honda CIVIC 2006-2011 ကား DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဟွန်ဒါ ACCORD 2013-2015 များအတွက် Android ကား DVD ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Hyundai Sonata 2011-2013 အတွက်ကား Stereo
Hyundai Sonata 2011-2013 အတွက်ကား Stereo 1, 3D Navigation: ကားစတီရီယိုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်မှုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Hyundai Sonata အတွက် ၂၀၁၁-၂၀၁၃ အတွက်ကား Stereo သည်လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊...
သဘောတူညီချက်အတွက် Navigation Multimedia Player Car Stereo 8
သဘောတူညီချက်အတွက် Navigation Multimedia Player Car Stereo 8 ၁။ Navigation Multimedia Player Car Stereo for Accord 8 - ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲနိုင်သောနောက်ခံ - 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်သည်။...
Navigation Multimedia Player Car Stereo Civic ၂၀၀၆
Navigation Multimedia Player Car Stereo Civic ၂၀၀၆ ၁။ Civic 2006 အတွက် Multimedia Player Car Stereo နှင့် Andriod နှင့် Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD Player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဂျပန်၊...
Prado 2014 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD
Prado 2014 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ၁.၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD Prado 2014 အတွက် android နှင့် wince Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အတွေ့အကြုံ ၇ နှစ်ရှိပြီးဂျပန်၊ ရုရှား၊...
Civic 2012 အတွက် 10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို
Civic 2012 အတွက် 10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို ၁.၁.၁.၁ လက်မအရွယ် Deckless Car DVD သည် Civic ၂၀၁၂ အတွက် android နှင့် winc Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဂျပန်၊...
Sonata 2011-2013 2din android ကားတစ်စီးအသံ
Sonata 2011-2013 2din android ကားတစ်စီးအသံ ၁။ Sonata 2011-2013 2DD android ကားအသံ နှင့် Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD audio သည်ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း Car DVD Player တွင်အတွေ့အကြုံ ၇ နှစ်ရှိပြီးဂျပန်၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊...
Nissan Sylphy အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ဖြစ်သည်
Nissan Sylphy အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ဖြစ်သည် ၁.၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD Nissan Sylphy အတွက် android နှင့် Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဂျပန်၊...
10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို Highlander 2015
10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို Highlander 2015 ၁.၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD Highlander ၂၀၁၅ android နှင့် wince Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဂျပန်၊ ရုရှား၊...
Toyota RAV4 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car
Toyota RAV4 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car DVD ၁.၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car DVD Toyota RAV4 အတွက် android နှင့် wince Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇...
CRV 2015 အတွက် 10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို
CRV 2015 အတွက် 10.1 လက်မ Deckless ကား DVD ကို ၁.၁.၁.၁ လက်မ Deckless Car DVD CRV 2015 အတွက် android နှင့် wince Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဂျပန်၊ ရုရှား၊...
VW Golf7 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ဖြစ်သည်
VW Golf7 အတွက် ၁၀.၁ လက်မ Deckless Car DVD ဖြစ်သည် ၁.၁.၁.၁ လက်မ Deckless Car DVD အတွက် VW Golf7 အတွက် android နှင့် Car DVD Player အပါအ ၀ င် Car DVD player ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင် ၇ နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီးဂျပန်၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊...
IX25 အတွက် 1024x600 Octa Core Car DVD
Supply နိုင်ခြင်း: 350000 Year
IX25 အတွက် 1024x600 Octa Core Car DVD ၁။ IX25 အတွက် 1024x600 Octa Core Car DVD အတွက်ဒီ DVD player သည် gps navigation function ကိုထောက်ပံ့သည်။ ဤ dvd gps ကားသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ၁၂ လအာမခံချက်ပေးသည်။ cpu သည်4core Rockchip PX3 Cortex A9၊...
၁၀.၁ လက်မ Deckless 2013-2015 Nissan Qashqai
၁၀.၁ လက်မ Deckless 2013-2015 Nissan Qashqai အဓိကလုပ်ဆောင်ချက် (Menu ဘာသာစကား - ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိဘာသာစကားများ) ၁။ ထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက် - အညွှန်း၊ USB / SD အသံ / ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်၊ ဖုန်းမှလက်ကိုင်ဖုန်းဖုန်း / ဂီတအတွက် blueooth၊...
2G RAM 16G ROM Stereo နှင့်သဘောတူညီမှု ၇
ထုပ်ပိုး: 265 * 255 * 185MM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
2G RAM 16G ROM Stereo နှင့်သဘောတူညီမှု ၇ ၁ ။ ဖန်သားပြင်ကိုထင်ဟပ်ပြခြင်း ; နောက်ဆုံးထုတ် Rockchip PX3 Cortex A9 Quad Core; ROM 16GB ; HD 1024 * 600 resolution ; Built-in WiFi လုပ်ဆောင်ချက် ၊ 2G RAM 16G ROM Stereo နှင့်သဘောတူညီမှု ၇ Built-in DVR...
2G RAM 16G ROM Stereo ဖြင့် ၂၀၀၆ စီးတီး
2G RAM 16G ROM Stereo ဖြင့် ၂၀၀၆ စီးတီး ၁။ သန့်ရှင်းသော android 7.1.1 system! ၉ လက်မ VW / SKODA / SEAT အတွက်စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုနှင့် (canbus ဖြင့်) + quad core 1.6GHZ CPU + DDR3 2GB RAM + 16GB ROM + 1024 * 600 HD မျက်နှာပြင် + capacitive screen...
VW ဂေါက်သီး7ကား DVD ကိုသွားလာမှု
ဂေါက်သီး72013-2015 10.1 လက်မ DVD ကစားသမား ၁. ဂေါက်သီး ၇ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတွက် ၁၀.၁ လက်မကားဒီဗီဒီ၊ ဒီကားဒီဗွီဒီသည် ၁၀.၁ လက်မအကျယ်ကင်းသော၊ ထိတွေ့ခလုတ်၊ အဓိကအားဖြင့်ဂေါက်သီး ၇၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတွက်အသုံးပြုသည်။ စခရင်ရိုက်ကူးမှုစနစ်ဖြင့်၊...
Toyota VIOS / YARIS ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတွက်က deckless car DVD
Toyota VIOS / YARIS ၂၀၁၃-၂၀၁၅ အတွက်က deckless car DVD ၁။ Toyota VIOS / YARIS 2013-2015 navigation system အတွက် deckless car DVD သည်အိမ်သုံးကွန်ပျူတာနှင့် navigation display terminal တွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ ပါ ၀ င်သည့် GPS...
Kia K3 အတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၅ အတွက် deckless car DVD player
Kia K3 အတွက် ၂၀၁၂-၂၀၁၅ အတွက် deckless car DVD player ၁။ Kia K3 2012-2015 navigation system အတွက် deckless car DVD player သည်ကွန်ပျူတာနှင့် navigation display terminal တွင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်သည်။ ပါ ၀ င်သည့် GPS...
Ford ESCORT 2014-2015 အတွက် deckless car DVD ဖြစ်သည်
Ford ESCORT 2014-2015 အတွက် deckless car DVD ဖြစ်သည် 1. စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ လာမည့်သီချင်းကိုကျော်။ အသံပမာဏကိုချိန်ညှိပါသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ။ စတီယာရင်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲစရာမလိုဘဲ၊ Ford ESCORT 2014 အတွက်ဒီ...
က deckless 10.1 လက်မ Honda CIVIC 2006-2011 ကား DVD ကို
က deckless 10.1 လက်မ Honda CIVIC 2006-2011 ကား DVD ကို 1. စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ လာမည့်သီချင်းကိုကျော်။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုညှိပါသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ။ စတီယာရင်ကိုနောက်မကျစေဘဲ ၁၀.၁ လက်မရှိသော ၁၀.၁ လက်မ Honda...
ဟွန်ဒါ ACCORD 2013-2015 များအတွက် Android ကား DVD ကို
ဟွန်ဒါ ACCORD 2013-2015 များအတွက် Android ကား DVD ကို၁။ ဒီကားဒီဗီဒီသည် ၁၀.၁ လက်မကုန်းပတ်မဲ့ဖြစ်ပြီးထိတွေ့ခလုတ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် Honda Accord 2013-2015 အတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ စခရင်ရိုက်ကူးမှုလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊...
တရုတ်နိုင်ငံ ၁၀.၁ လက်မ Deckless Android Car Dvd ပေးသွင်း
10.1inch deckless Android Car Dvd တွင်မော်ဒယ်များစွာရှိပြီးမျက်နှာပြင်သည် 10.1inch နှင့် 1024 * 600 reslution ရှိသည်။
usb port ပါသော ၁၀ လက်မ car dvd player သည် deckless ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြင်ပ dvd box ကိုသင်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်ဖောက်သည်အတွက်တကယ်ကောင်းသည်။
10.1inch သည် deckless ဖြစ်ပါသည်။ ဂူဂဲလ်မြေပုံများ၊ Youtube နှင့် Facebook အပါအ ၀ င် android system တွင်အသုံးပြုသော application များစွာ၏အားသာချက်များကိုရယူပါ။ အနီးအနားဆုံးစျေးအချိုဆုံးသောဓာတ်ဆီဆိုင်ကိုရှာပါ၊
၁၀.၁ "Android Car DVD 10.1 "Android 5.1 Car Dvd 10.1 "Android 4.4 Car Dvd 10.1 "Android 5.1.1 Car Dvd Android9Car DVD